Mashiinka gaaska dareeraha ah ee dareeraha-gaaska ah guud ahaan waxaa loo yaqaanaa dhululubo xoojiya. Mashiinka kororka gaaska-dareeraha ayaa lagu daraa silsiladda iyo faa'iidooyinka silsiladda iyo hagaajinta naqshadeynta, saliida haydarka iyo go'doominta adag, hawo cufan oo ku jirta usha bistoolada ee qaybta xiriirka shaqada si toos ah safarka kadib, xawaaraha dhaqdhaqaaqa, xasiloonida, iyo gudbinta hawada Qalabka xannibaadda waa mid fudud, hagaajinta wax soo saarku way fududahay, waxay ku guuleysan kartaa xoog sare oo ka mid ah saxaafadda hidda ee isla xaaladahaas, isticmaalka tamarta oo hooseeya, soo degitaan jilicsan ma ahan waxyeello caaryo ah, fududahay in la rakibo oo la rakibo dhululubo cadaadis gaar ah leh waxay noqon kartaa 360 digrii xagal kasta, booska la haysto waa yar yahay, cillad hooseysa ee kor u kaca heerkulka, nolosha dheer, buuqa hooseeya, iyo astaamaha kale ee muhiimka ah. Dhululuca cadaadiska leh wuxuu adeegsadaa cadaadiska guud ee hawada si loo gaaro awoodda sare ee silsiladda korantada iyada oo aan loo baahnayn unug hidda-haye ah.
Mashiinka dhuuban waa qayb bir ah oo silsilad ah oo piston-ka lagu hagayo inuu ku soo celiyo khadka toosan. Dhexdhexaadiyaha shaqeeya wuxuu u beddelaa tamarta kuleylka tamar farsamo iyadoo lagu ballaarinayo mashiinka mashiinka; Gaasku wuxuu helayaa riixitaan piston ah oo ku jira silsiladda kombaresarada wuxuuna kordhiyaa cadaadiska. Hoyga makiinadaha marawaxadaha, mashiinka baastada wareega, iwm, ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dhululubo.
Dhululubo dhuuban, oo leh qaab dhismeed is haysta, miisaan fudud, meel yar iyo faa'iidooyin kale.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa joogsiga santuuqa xariiqda wax soo saarka, sidaas darteed sidoo kale waxaa loogu yeeraa silsiladda joogsiga, sababtoo ah istaroogga shaqada ee joogtada ah, sidaas darteed sidoo kale waxaa jira shirkado loo yaqaan 'cylinder rod range-cylinder'.